ကြိုတင်ငွေပေးထားသည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို MásMóvil အားပြန်သွင်းပါ။ နှုန်းထားများ
MásMóvil သည် စပိန်နိုင်ငံ၏ အဓိက တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများသည် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။. နိုင်ငံအတွင်း စတုတ္ထမြောက် အော်ပရေတာဖြစ်သောကြောင့် ၎င်း၏MásMóvil ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်းထားများဖြင့် အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများရှိပါသည်။
ဒါက ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ 2008 ခုနှစ်ကတည်းကစတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။သုံးစွဲသူတစ်ဦးစီ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ပရိုမိုးရှင်းများဖြင့် လမ်းကြောင်းပြခြင်း၏ အရှိန်အဟုန်ကြီးမားသော ထိုအချိန်မှစ၍ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့ကို မီးမောင်းထိုးပြကာ ကြိုတင်ငွေပေးထားသည့် MásMóvil ကို ငှားရမ်းသည့်အခါ အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသည်။. ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့တွင် သင်ဆက်သွယ်လိုသည့်အရာအားလုံးရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည် စျေးကွက်တွင် အပြည့်စုံဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
MásMóvil ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်းထားများထဲမှ တစ်ခုကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို မသိပါက၊ ဤနေရာတွင် ပြုလုပ်ရန် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကို ပြောပြပါမည်။ သင်အမြဲချိတ်ဆက်နေစေရန် အားပြန်သွင်းနည်းကို လေ့လာပါ။
MásMóvil သည် သင့်အား ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်းထား နှစ်မျိုးအကြား ရွေးချယ်ခွင့် ပေးသည်- ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် ဒေတာ သို့မဟုတ် ခေါ်ဆိုမှုများသာ ၎င်းတို့ကို တစ်ဦးချင်းကသာ ငှားရမ်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကုမ္ပဏီများတွင် အသုံးပြုရန် ခွင့်မပြုပါ။
ဤနှုန်းထားအမျိုးအစားတွင် ပေးထားသည့် ရှာဖွေမှုအမြန်နှုန်းမှာ GPRS၊ 3G၊ 3G+ သို့မဟုတ် 4G ဖြစ်သည်။ ဤမိုဘိုင်းအော်ပရေတာသည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်းထားနှစ်ခုကို ပေးဆောင်သည်- စုစုပေါင်း ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်း သုညနှင့် အကန့်အသတ်မရှိ ကြိုတင်ငွေပေးချေသည့် အသံနှုန်း။
စုစုပေါင်း ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်း သုည
၎င်းနှင့်အတူ၊ သင့်စားသုံးမှုလိုအပ်ချက်အရ မိနစ်ဘောနပ်စ်နှင့် ဒေတာအပိုဆုများကို လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ 4G ၏ အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းဖြင့် သွားလာနိုင်ပြီး သင့်ခေါ်ဆိုမှုများကို အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် အမြဲတမ်းပြုလုပ်နိုင်သည့်နေရာ။
သင့်အသံနှင့် ဒေတာဘောက်ချာများကို စားသုံးပါက၊ MásMóvil သည် သက်ဆိုင်ရာ ထပ်ဆောင်းကုန်ကျစရိတ်အတွက် သင့်အား ပြေစာပေးပါမည်။ သင့်ဘောက်ချာများကို သက်တမ်းတိုးခြင်းသည် အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၂၈ ရက်တကြိမ်ဖြစ်သည်သို့သော် အားပြန်သွင်းရန် သင့်တွင် လက်ကျန်ငွေ အလုံအလောက်ရှိမှသာလျှင် ဤအရာသည်
MásMóvil ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်းထားများကို ရယူရန်၊ ဝင်ပါ။ ဒီမှာ "" ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကို ရွေးချယ်ပါ။ငါသူ့ကိုချစ်တယ်” အကြားတွင် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်-
ZERO ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်း 50MIN + 600MB
ZERO PREPAID RATE0CENT + 2GB
GB မပါဘဲ အကန့်အသတ်မရှိ အသံ
ZERO ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်း 150 မိနစ် + 2GB
အကန့်အသတ်မရှိ ကြိုတင်ငွေပေးသည့် အသံနှုန်း
စိတ်မပူဘဲ စကားပြောပါ။ ဒေတာအပိုဆုကြေးများမပါဘဲအကန့်အသတ်မရှိမိနစ်သူမနှင့် သင်အလိုရှိသမျှ စကားပြောနိုင်သည်။ နိုင်ငံအလိုက် ကြိုးဖုန်းများနှင့် မိုဘိုင်းလ်များသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သုံးစွဲသူထံ ပေးပို့သည့် SIM ကတ်သည် အခမဲ့ဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ ပေးပို့မှုတွင် အခကြေးငွေများ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်လာစေရန်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် တရားဝင်စတိုးဆိုင်များမှ ဆင်းမ်ကတ်ကို ဝဘ်မှဝယ်ယူနိုင်စေရန်အတွက် သင်၏MásMóvil ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်းထားများကို သင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ စစ်ဆေးပါ။ မြေပုံ သင့်တည်နေရာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးကို ရှာဖွေရန်။
အကယ်၍ သင်သည် MásMóvil ဖောက်သည်မဖြစ်သေးသော်လည်း ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်းထားဖြင့် ငှားရမ်းလိုပါက အကောင့်ဖွင့်ရန် အလွန်လွယ်ကူသည်၊ သင်သည် သင်၏အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းသာ လိုအပ်ပါသည်။ အသက်ကြီးရင့်ပြီတရားဝင်အီးမေးလ်ရှိပြီး စပိန်တွင် ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုရှိသည်။
သင်၏MásMóvilကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်းထားများမှတဆင့်ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းကိုသင်အသက်သွင်းနိုင်သည်။ လိုင်းareaရိယာRENEW သို့မဟုတ် 2377 သို့ RENEW ဟူသော စကားလုံးဖြင့် SMS ပေးပို့ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပြီးပါက သင့်အကောင့်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် သင့်အကောင့်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် သင့်ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်နှင့် စကားဝှက်ကို ဖောက်သည်ဧရိယာတွင် မှတ်ပုံတင်ရပါမည်။
ဒါပေမယ့် သင်ဟာ အားပြန်သွင်းဖို့ မေ့နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် MásMóvil မှာ စိတ်မပူပါနဲ့။ အလိုအလျောက် အားပြန်သွင်းခြင်း။သင့်လိုင်းကို ဘဏ်ကတ်တစ်ခုဖြင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်၊ သင့်နှုန်းထား၏တန်ဖိုးကို လစဉ် သို့မဟုတ် သင့်တွင်5ယူရိုထက်နည်းသည့်အခါတွင် လျှော့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဒီအားပြန်သွင်းခြင်းဖြင့် ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှုန်းထားများနှင့် စာချုပ်နှုန်းထားများ၏ အားသာချက်များကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။.
သင့်တွင်ရှိသော ငွေဖြည့်စတိုးဆိုင်အချို့မှာ- ဝန်ဆောင်မှုပေးသော၊ 4B နှင့် ယူရို 6000 ATM စက်များ၊ အွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ အရောင်းဆိုင်များ၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်များနှင့် ဟိုက်ပါမားကတ်များမှတဆင့်။
ဖုန်းငွေဖြည့်ပါ » ကုမ္ပဏီများ » ကြိုတင်ငွေပေးထားသည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို MásMóvil အားပြန်သွင်းပါ။ နှုန်းထားများ